Samsung Galaxy A71 ayaa ka muuqda fiidiyowga xagalkiisa oo dhan | Androidsis
El Samsung Galaxy Note 10 wuxuu isticmaalaa dalool shaashadda shaashadda oo ka duwan kan laga helay Galaxy S10. Marka lagu daro inuu ka sii yaraado daloolka ku yaal qeybta looxkan, waxaa lagu dhejinayaa bartamaha kore ee shaashadda oo aan la dhigin geeska midig.
Galaxy Note 10 ma noqon doono mid xambaarsan xalka gaarka ah ee xalkaan. Telefoon kale oo casri ah oo dooran doona inuu qaato isla naqshadda daloolka shaashadda ayaa noqon doonta Galaxy A71, terminal waxqabad hoose oo durba ku jira heerkiisii ​​ugu dambeeyay ee diyaarinta oo ka soo muuqday muuqaal fiidiyoow leh oo dhan soo bandhigistiisa.
Daadku waa qayb ka mid ah 3D-bixinno laga soo qaatay asal ahaan xushmad-bixiye xilliyeed Steve Hemmerstoffer, oo sidoo kale loo yaqaan OnLeaks. Markan isagu wuu is kaashaday CashKaro si ay u soo saaraan. Bixiyayaashu waxay na siinayaan aragti hore qaabeynta Galaxy A71.
Ral iyo sida aan ku arki karno fiidiyowga, Samsung waxay xiirtay xarkaha saddexda dhinac ah, iyadoo ay u hadhaysay xoogaa milimitir xagga hoose. Shaashaddu waa hubaal AMOLED, laakiin daloolka ayaa u muuqda inuu waxyar ka weynaaday midka ku yaal Galaxy Note 10.
Dhanka dambe, Galaxy A71 wuxuu soo bandhigayaa kuus kuus kamarad qaabaysan oo la mid ah midka Smartisan Nut Pro 3. Guryaha kamaraduhu way weyn yihiin waxayna leeyihiin afar kamaradood oo loo qaabeeyey qaab 'L' ah. Waxa kale oo jira iftiin LED ah oo ku xiga dareemayaasha. Waxaan sidoo kale ogaan karnaa in uusan jirin akhristaha sawirka faraha ee ku yaal meel kasta oo dhinaca dambe ah; Tani waxay noo sheegaysaa in shirkaddu u janjeedho inay dhigto shaashadda hoosteeda.
Kuwani waa kaamirooyinka ay casriga casriga ah ee Galaxy A xiga ee 2020 yeelan doonaan
Daadinta ma aysan la socon faahfaahin badan oo ku saabsan astaamaha iyo tilmaamaha mobilada, laakiin waxaa la ogaaday taas cabirka shaashadu waa 6.7 inji cabirkiisuna waa 163.5 x 76 x 9.2 milimitir. Waxay kaloo leedahay dekedda USB Type-C ee hoosta ku taal oo ay dhinac yaalliin qalabka wax lagu hadlo, makarafoonka aasaasiga ah ee midigta ku yaal, iyo aaladda bidix ee loo yaqaan '3,5mm audio Jack'. Saxanka SIM-ku wuxuu ku yaal dhinaca bidix ee jir, halka mugga iyo badhanka awoodda ay ku yaalaan midigta. Dadku waxay dhahaan SoC-da ay sidato waa Exynos 980 oo leh taageero 5G.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Wax soosaarka 3D ee Samsung Galaxy A71 ayaa ka muuqda fiidiyow ka tilmaamaya dhan walba
Chat4All waa barnaamij ku habboon cayaartooyda sidaasna ay isku fahmaan jinsiyadaha kala duwan